न दुलाहा आए न जन्ती, बानेश्वरको पार्टी प्यालेसमा दुलही पक्ष पर्खेको पर्ख्यै ? ७ सय जनाका लागि खानपानको व्यवस्था अलपत्र – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/न दुलाहा आए न जन्ती, बानेश्वरको पार्टी प्यालेसमा दुलही पक्ष पर्खेको पर्ख्यै ? ७ सय जनाका लागि खानपानको व्यवस्था अलपत्र
न दुलाहा आए न जन्ती, बानेश्वरको पार्टी प्यालेसमा दुलही पक्ष पर्खेको पर्ख्यै ? ७ सय जनाका लागि खानपानको व्यवस्था अलपत्र
काठमाडौं, फागुन १५-बानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा मंगलबार विवाहको भोज थियो। करिब ७ सय जनाका लागि खानपानको व्यवस्था थियो।मूलथलो पूर्वी पहाडी जिल्लाबाट केटीको परिवारले जन्तीलाई खुवाउन भनेर चारवटा खसी नै काठमाडौं ल्याएको थियो। काठमाडौांम रहेका आफ्ना जिल्लावासी र चिनेजानेका सबैलाई केटीको परिवारले निम्त्याएको थियो।